ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် Air Filter ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုသလဲ။
စက်ယန္တယားတွေနဲ့ကားတွေမှာ Air Filter ဟာ အရေးပါလွန်းတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Air Filter တွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သလို စစ်ဆေးပြီး အသစ်လဲသစ်ရင်လည်း လဲပေးရပါမယ်။ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေကို သတိထားမိရင် Air Filter တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်လဲဆိုတာကို တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ပါ။ 1. Air Filter ကိုယ်ထည်ညစ်ပတ်ခြင်း။ Air Filter တစ်လုံးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမဲရောင်ဘက်သမ်းလာပြီဆိုရင် သင့် Air Filter ကိုသန့်ရှင်းသင့်ပါပြီ။ Air Filter ကို လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်ရမရစစ်ဆေးပြီး အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြောင့် Air Filter ကနေစစ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ စုပုံနေလား မစုပုံဘူးလားဆိုတာ စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ 2. ဂတ်စ်ဒါမှမဟုတ် ဆီကုန်နေလား။ ဂတ်စ်ဒါမှမဟုတ် ဆီကုန်နေတဲ့ လက္ခဏာပြရင် Air Filter
Read More “ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် Air Filter ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုသလဲ။”
VOLVO EC300E HYBRID (NEW Product)
‘‘SIMPLE SOLUTION, BIG SAVINGS” “ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ နည်းပညာ” အဆင့်မြှင့်ထားသော EC300E Hybrid ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ အဆင့်မြင့် Hydraulic စနစ် နှင့် VOLVO နည်းပညာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုထားလို့ boom down motion နဲ့ Accumulator ကို အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်စနစ်ကို လည်ပတ်စေတဲ့ မော်တာကိုလဲ သိုလှောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်ဖြင့်သာ မောင်းနှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံမှန် EC300E ကို လည်ပတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ လောင်စာဆီထိရောက်မှုပမာဏကို ၁၇% ထိ လျော့ကျစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ “FEATURES & BENEFITS” *ရိုးရှင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ တည်ဆောက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားလွန်းလှတဲ့ EC300E ကို ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပေါင်းစပ်တည်ဆောက်ထားလို့ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူစေပါတယ်။
Read More “VOLVO EC300E HYBRID (NEW Product)”
အခုအချိန်ဟာ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဖြစ်တာကြောင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေမှာ မီးလောင်မှုတွေ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ BUDOZAR ရဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် မီးဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်စေနိုင်ဖို့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်ကလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် (၁) ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ မီးဘေးအန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အမှိုတ်သရိုက်တွေ ရှိမနေအောင် အမြဲသတိထားပါ။ နေ့စဉ် ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေးတွေကို လုပ်ဆောင်ပါ။ (၂) နံရံမှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ မီးသတ်ဆေးဘူးတွေ နေရာကို ပိတ်ဆို့ပြီး ကုန်ပစ္စည်းတွေ မထားပါနဲ့။ အမြဲတမ်း အလွယ်တကူ ယူနိုင်တဲ့ နေရာမှာသာ မီးသတ်ဆေးဘူးတွေကို ထားပါ။ (၃) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်းကို တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ပါ။ ဆေးလိပ်မသောက်ရဆိုင်းဘုတ်တွေကို မြင်သာထင်သာအောင် ရေးသားထားပါ။ (၄) မီးကြိုး၊ ပလက်ခုံစတဲ့
Read More “မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်စေနိုင်ဖို့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်များ”
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ Hydraulic Oil များအကြောင်း
စက်ယန္တရားကြီးတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီကို ရိုးရိုးသာမန် အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီတွေနဲ့ မှားယွင်းတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်မျိုးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ သဘောသဘာ၀ကလည်း တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူညီကြပါဘူး။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အင်ဂျင်ထဲက ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ပိုင်းတွေရဲ့ ပါဝါစွမ်းအားတွေကို မြှင်တင်ပေးဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့အတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း အင်ဂျင်တစ်လုံး အလုပ်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေကို အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်ထဲကို ဆီဖြည့်တဲ့အခါ အများကြီး လျှံကျနေအောင် မဖြည့်မိဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပိုလျှံအောင် ဖြည့်မိတယ်ဆိုရင် ဆီတွေက filler cap ကနေ ယိုစိမ့်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီမရှိဘဲ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တစ်ခုလုံးကို မောင်းနှင်ခြင်းကလည်း ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့်တွေနဲ့ တခြားအတွင်း
Read More “ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ Hydraulic Oil များအကြောင်း”
Air Cleaner လေစစ်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ
ဘယ်လို စက်ယန္တရားမျိုးမှာမဆို အင်ဂျင်တစ်လုံး ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် Air Cleaner လေစစ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အဓိက ကျပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ လေစစ်တစ်ခုက အင်ဂျင်အထဲကို မလိုအပ်တဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ အမှိုက်တွေ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ယန္တရားကြီးတွေထဲမှာ ရှိတဲ့ လေစစ်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေက စက်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အသုံးပြုချိန်နဲ့ အသုံးပြုတဲ့ နေရာတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး နေရာ အနေအထားအလိုက် ကွဲပြားချက်တွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ – ကိုယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင် အနေအထားနဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လေစစ်တွေရဲ့ သန့်ရှင်းရေးကို သတိထား လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ – စက်ယန္တရားကြီးကို နာရီချိန်ပေါင်း (၂၅၀) ပြည့်တဲ့အခါတိုင်း၊
Read More “Air Cleaner လေစစ်ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ”
အင်ဂျင် Heat တက်တာ မဟုတ်ဘဲဘာလို့ မီးခိုးလိုက်ရတာလဲ?
ကားဘောနက်စ်အောက်ကနေမီးခိုးတွေထွက်လာတာက Heat တက်တာတစ်ခုထဲကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်… ထွက်လာတဲ့မီးခိုးနံ့က ကတ္တရာညှော်နံ့ဆိုရင်တော့ ဆီကိုလောင်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဂတ်စ်ကတ်ပျက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ အဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်… ကားအဟောင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ မီးခိုတွေကဆီအဖုံးနေရာက ထွက်လာနိုင်ပါတယ်… ဒီလိုဖြစ်ရတာကတော့ ဆီဖြည့်ချိန်တိုင်းကျန်ခဲ့တဲ့ ဆီအကြွင်းကျန်တွေ စုပုံလာပြီး အင်ဂျင်ပူလာတဲ့အခါ လောင်သွားလို့ဖြစ်ပါတယ်… ပစ္စတင်ဆလင်ဒါထဲမှာရှိတဲ့ အဆို့တွေပျက်နေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်… အမဲရောင်မီးခိုးတွေထွက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ လောင်စာဆီတွေက ကောင်းမွန်စွာမရောစပ်ထားလို့ပါ… အတွင်းထဲကိုလေသယ်ယူပေးတဲ့စနစ် ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် လောင်စာအရောထဲကို လေမရောက်တဲ့အတွက် လောင်စာများလွန်းပြီး အခုလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်… လောင်စာဆီဆင်ဆာပျက်နေချိန်မှာလည်း ဒီလိုပြဿနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်… ကားထဲမှာရှိတဲ့အရည်တွေ စိမ့်ထွက်နေရင်လည်း အငွေ့ပျံပြီးမီးလောင်ခြင်း၊ Coolant အရည်မီးလောင်ခြင်း၊ ပါဝါစီယာတိုင်အရည် သို့မဟုတ် ဂီယာဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းတို့ဖြစ်ပြီး မီးခိုးလိုက်စေပါတယ်… ဘယ်လိုယိုစိမ့်မှုမျိုးကိုမဆို အသေအချာကိုင်တွယ်ပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်… နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းပေမယ့် လျှပ်စစ်စနစ်ကြောင့်လည်း မီးခိုးထွက်နိုင်ပါတယ်… အော်တာနေတာ (Alternator) ပျက်သွားတာ၊ တိုသွားတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း အဖြူရောင်မီးခိုးငွေ့တွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်….
အမဲဆီ ထည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကြာင်းရင်းများ
• အမြဲတစေသုံးနေတာမဟုတ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာ အမဲဆီထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ • ဂီယာအုံနဲ့တခြားရှုပ်ထွေးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေလိုမျိုး အလုံပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ တခြား ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မှုနည်းပါးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ချောမွေ့စေဖို့ အမဲဆီထည့်ဖို့လိုပါတယ်။ • နှေးကွေးစွာရွေ့လျားတဲ့ စက်ယန္တရားတွေကို ချောမွေ့စွာလည်ပတ်စေဖို့ အမဲဆီလိုပါတယ်။ • ဖိအားမြင့်မားခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ ဝန်တန်ချိန်များစွာသယ်ဆောင်ရခြင်းစတဲ့ ထူးကဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ လည်ပတ်ရတဲ့စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို အမဲဆီထည့်ဖို့လိုပါတယ်။ • စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ ထိခိုက်ပွန်းတီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နဲ့ အင်ဂျင်သက်တမ်းရှည်ကြာစေဖို့အတွက် အမဲဆီထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။